Kudzivisa Android Malware - All And More By Semalt
Android malware iripo pose pawebhu. Zvisinei, iyo Android's Foundation, Linux yakawanikwa inenge yakasununguka yevirware. Zvinonzwisisika, Trend Micro yakagara ichitaura kuti zvingave zvinodarika mamiriyoni Android Trojans pakupera kwegore. Windows inowanikwa pane desktop, asi kune dzimwe nzvimbo, Linux inozivikanwa zvakare - oculos de sol ray ban azul. Nokudaro, vanhu vanozobvunza kuti, sei iga Android inotarirwa nemarware?
Ivan Konovalov, Mutungamiri Wekubudirira Kwevatereji Semalt , anotsanangura chikonzero nei uchifanira kuchengetedza chigadzirwa chako.
Kutanga, Android yakakurumbira. Maererano neCanalys tsvakurudzo ye2013, Android yakatungamirirwa ne 59.5 muzana ese mafoni ese efoni akaendeswa. Somugumisiro, Jupiter Networks Mobile Threat Centre yakashuma kuti magetsi ekutengesa mabhizimusi anotarisa 'apo hove dziri.' Saizvozvowo, vashandi ve-cyber vakatarisa zvizhinji zvekutyisidzira kweApprosoft apps nevatadzi.
Mushure maizvozvi, Android inoita kuti zvive nyore kuisa software yakaipa kana ichienzaniswa nedzimwe nzvimbo dzakadai seLuxux. Nokudaro, malware inokurumidza kushanyira mafoni eWeblue kana mahwendefa. Saka, kana iwe uchida kushandisa chigadzirwa chako nekuchengeteka, ingovimbisa kuti iwe unoteerera mitemo iyi iri nyore.
Chokutanga, ngwarira kushanyira uye kukanda mapurogiramu kubva kunzvimbo dzinochengetedza. Blue Coat kuchengeteka kambani yakaona kuti zvinonyadzisira ndizvo zvinotyisa. Zvinonzwisisika, nzvimbo inonyanya kuipa kune vashandisi vesefoni yakawanikwa yakave zvinonyadzisira..Somugumisiro, zvinopfuura 25 muzana yenguva iyo munhu anoshanyira imwe webhusaiti yakaipa, ivo vaibva kunzvimbo yepabonde. Nokudaro, nekudzivisa nzvimbo idzi, iwe uchachengeteka kubva pakuderera kwemarware.
Chechipiri, usambokwanisa kukopera mapurogiramu kubva kune zvitatu zvekutamba zveGoogle. Juniper Networks akawana kuti vanyori ve-malware vanonyanya kutarisa muzvitoro zvevechitatu zvemaIndaneti. Uyezve, zvivako zvakadaro zvave zvichitungamirirwa neAroid Virus uye zvenhema installers dzinoti dzinoshanda zvakakodzera. Zvinokurudzirwa kubatana nechenda yeGoogle yechitoro.
Saizvozvowo, tsvagurudza kune shanduro itsva ye Android. Maererano naJuniper Networks, 77 muzana yeAroid Trojans vanoita mari yavo nokutumira mameseji. Ikozvino shanduro dzeAroid dzinokuzivisa iwe apo shanduro inoedza kutumira SMS premium nezvimwe zvikwereti. Nokudaro, unogona kubvumira purogiramu kutumira mharidzo kana kuivhara.
Mushure meizvi, simbisai kubvumirana kweyese software pamberi pekuisa uye nekuita kuti iongobvunza zvibvumirano zvinodiwa. Pasinei nokuti iGoogle yakafambira mberi pakuchenesa malware kubva muchitoro chayo, unofanirwa kuve wakangwarira nezvezvirongwa zvisingazivikanwi. Tarisa zvakanyatsoongorora, nhamba yevashandisi uye zita remusukiri kuti ave nechokwadi chechokwadi chepurogiramu. Uyezve, chengeta zvibvumirano zve software. Kana musikoni wekunyora asina chaanoreva ipapo ngachenjerere uye gara kure.
Pakupedzisira, shandisa anti-virusi software. Une virusi yakawanda kunze uko, haufaniri kushandisa kifaa cheAroid pasina anti-virus yekudzivirira. Vanhu vazhinji vanofunga kuti Android anti-virus zvirongwa hazvina maturo. Zvisinei, izvi hazvisi izvo zvinhu zvachinja. Somuenzaniso, muna February 2013, AV-TEST yakawana kuti 21 anti-virusi Apps vakakwanisa kuwana zvigutsa zvinogutsa. Iyi miedzo yakatakurwa paSain Galaxy Nexus inotanga kuIndaneti 4.1.2 pamusoro pe 1000 malware. Saka, sei urege kuita kuti Android yako ichengetedzwe?